राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी, कमल थापा पराजित | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १९, २०७८ chat_bubble_outline1
राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापालाई हराउँदै युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देन विजयी भएका छन् । आइतबार बिहान सम्पन्न मतपरिणामबाट थापालाई २२७ मतले हराउँदै लिङ्देन विजयी भएका हुन् । निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतले लिङ्देन १८४४ मतका साथ विजयी भएको जानकारी दिए । यस्तै पराजित थापाले १६१७ मत ल्याए । मतगणनामा ४३१ मत बदर भएको बस्नेतको भनाइ छ।
राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान भएको थियो भने आज रातभर मतगणना भएको थियो ।
Dec. 5, 2021, 8:53 a.m. Ninam Lowatti Kulung
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमार्चा, नेकपा माले (सीपी माले !) लगायतका राजनैतिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायका नेता हौं भन्ने तर...''अरुको हनुमाने !, झोलेपोके !, लगाम लगाएको घोडा !, हुकुमको तामेली !'' मात्रै गर्ने.... हरुले केही सिक्न सक्छन्, राजेन्द्र लिड.देनको यो विजयले । भलै अरुको 'हनुमाने, झोलेपोके, लगाम लगाएको घोडा हुकुमको तामेली मात्रै गर्ने !' बानी परेका/भएकाहरुले ''राजावादी !, खाजावादी !, आजावादी ! जाजावादी...!'' भन्न सक्छन् । तर, जुनसुकै राजनैतिक दलमा भए पनि हाम्रो मान्छेहरु अध्यक्ष भएकोमा कम्तिमा मलाईचाहिँ गर्व लागेको छ है !? अरुले लाए/अह्राएको मात्रै गर्ने बानी भएका...'हनुमाने, झोलेपोके, लगाम लगाएको घोडा बन्ने र हुकुमको तामेली मात्रै गर्ने !'...ज्युहरु, रिसानी माफ है ?!?!....